I-Scholarships - NLP - Master & PhD
I-Master's kanye ne-PhD ekuHlangeni uLimi Lwezendalo
Iminyaka engu-6 yocwaningo ngaphandle kokucabanga ngemali
Ayikho mboleko • Ayikho umthwalo wokusebenza owengeziwe • Okuqinisekisiwe nguHulumeni
Indlela yokufunda i-Master's noma i-PhD ngaphandle? Indlela yokufunda emazweni aseMelika? Ukuphi ukutadisha ulimi lwezemvelo? Indlela yokushicilela izihloko zesayensi kumaphephandaba aphezulu? Kuphi ukuthola ama-scholarship amahle we-Master's noma i-PhD? Ukufuna isikhundla se-Master noma se-PhD esixhaswe ngokugcwele?
(Lo mbhalo uhunyushwe ngokuzenzakalelayo ukuze usebenzise kahle kusukela ekuqaleni kwesiNgisi. Siyaxolisa nganoma yimaphi amaphutha.)
I- Labor Natural Processing Processing Laboratory yesikhungo se-Computing Research (CIC) se-National Polytechnic Institute (IPN), iMexico City, eMexico, inikeza inani elilinganiselwe labafundi bamazwe ngamazwe ukuthola i- Master's noma i- PhD degree kwi- Computer Science ngombono Indawo yokuThuthukiswa koLimi lweNdalo. Ngemuva kokuthola i-Master degree, abafundi bakhuthazwa ukuba bafake isicelo sezinga le-PhD, futhi (uma bedlula; ngokuvamile benza) ukufundiswa kwandiswe ngokufanele.
Izihloko zifaka phakathi, kodwa azikhawulelwanga, zonke izindawo zoLimi LokuCubungula Ngokwemvelo (NLP), IziLimi ZokuCubungula (CL), uLimi Lwezobuchwepheshe Lwabantu (HLT), kanye nezindawo ezihlobene. Bheka izincwadi zethu futhi uvikele izibonelo zezintshisekelo zethu zocwaningo.
Isibalo sesitifiketi: I- Master USD 600, i-PhD: 800 USD ngenyanga inyanga (kufaka phakathi amaholide; lapha kungabuyekezwa imininingwane ngesiSpanishi). Lokhu kungaphezu kokwanele kokuphila okuvamile nokuqasha igumbi eMexico City. I-scholarship ayiyona mboleko: awulindelekile ukuyibuyisela; Akukho service (njengokufundisa usizo) kuyadingeka. Nansi isethulo sami mayelana nezifundo zethu ezilungiselelwe i-Indiya (cishe cishe isetshenziswe esifundeni sakho, futhi).
Ubude besikhathi: I- Master's: kuze kufinyelele eminyakeni emibili (ngokuvamile isukela eminyakeni engu-2.5), i-PhD: iminyaka engama-4.
Uhlobo lwenqubo: Ucwaningo. Zombili izinhlelo zihloselwe ucwaningo lwesayensi kanye nokushicilelwa esikhundleni sokuthuthukisa amakhono akho okuhlela.
Ukuqashwa: Iningi labo abaqeshwe iziqu ze-PhD baqashwe emfundweni kanye nocwaningo oluxhaswe nguhulumeni, nakuba kunezindaba zokuphumelela zomsebenzi ezinkampanini eziphezulu. Abafundi bethu be-MSC bavame ukuqhubeka nezinga le-PhD; Labo abaqume ukungaqhubeki, baqashwe esikoleni noma embonini.
Ukungena: nansi incazelo yenqubo yethu yokungena, kodwa sicela ufunde ku; Uzothola isixhumanisi esifanayo kuleli phepha.
Kungani ufunda eCIC?
Isitifikedi: Zombili izinhlelo zethu ze-PhD kanye ne-Master zingenye yezinhlelo ezimbalwa eMexico eziqinisekisiwe nguHulumeni njengesimiso sezinga eliphezulu emhlabeni jikelele.
I-Elite: I- CIC iyindawo ephakeme yokucwaninga, isikhungo sokucwaninga sikazwelonke esihamba phambili ku-Computer Science.
Ikusasa: Cishe bonke abaqeqeshwayo be-PhD abaqeqeshi noma abacwaningi emayunivesithi amahle, abanye abane I-post-doctorate degree. Abaningi babo bazuze ukukhiqiza kwabo isitifiketi esibalulekile Umcwaningi wezwe waseMexico. Abaningi abaphothula iziqu zeNkosi yethu bayaqhubeka beyifundela I-PhD degree, abanye bethu kanye nabanye eYurophu, isib, e-UK noma eFrance.
Ikhwalithi: Abafundi bethu abaningi bathola Imiklomelo ebalulekile; Abathathu kubo bathola I-Gold Medal ezandleni zikaMengameli wezwe futhi omunye wamukela ngisho ne- Microsoft Research Latin America Fellowship.
Othintana nabo: Sihlanganyela ngokuhlanganyela namaqembu omcwaningi omuhle eYurophu, e-USA, e-Asia, e-Afrika naseLatin America.
Amathuba: Abaningana abafundi bethu baye baphumelela kwi-Microsoft, Oracle, Yahoo!, ne-Xerox. Sinikela ngemali yokuqeqeshelwa ama-internship kumayunivesithi asemhlabeni wonke.
Ukunqoba: Abafundi bethu banqobe imincintiswano yamazwe omhlaba wezinhlelo nezinhlelo zokusebenza.
Abacebisi: Abaprofesa bethu banomlando wokuqopha kahle, abafundisi be-Academy of Science and Mexican Abacwaningi bakazwelonke baseMexico bezinga eliphezulu kakhulu (abaphakeme kakhulu) noma 2 (abaphezulu), futhi bathole nemiklomelo ebalulekile.
Imali: Abafundi bethu banikezwa ngemali yokuya ezinkomfeni (ensimini kazwelonke nakwamanye amazwe angaphandle), kanye nokushicilela kumaphephandaba aphezulu adinga ukukhokha.
Imisebenzi: Abafundi bethu bahlanganyela ekuhleleni izinkomfa ezinkulu zamazwe ngamazwe njenge- CICLing noma i- MICAI futhi basize abacebisi babo kwezinye izinto ezibalulekile, njengokuhlela amaphephandaba ahloniphekile: i- CyS, i- IJCLA, i- POLIBITS, yimuphi amaprofesa weLebhubhu yethu abaHleli abaPhethe.
Ambience: Sineqembu lamazwe angaphandle labaprofesa nabafundi. Uhlelo lwethu lwe-PhD luneziprofesa ezivela Futhi i-Laboratory yethu iye yaba noma yabafundi . Abaprofesa bethu baqondisa noma baye baqondisa izihloko .
Isimo somngane: Abaprofesa bethu bayasiza futhi abafundi bethu banobungane; Sonke singabangane abahle.
Inkululeko: Abafundi bethu bakhetha isihloko abayithandayo; Sizozivumelanisa nezithakazelo zakho. Siphinde sikhululeke ngokuya emihlanganweni, izinsuku noma izivivinyo, njll.
Ukuvakasha: I- Mexico iyizwe elithakazelisayo futhi eliyingqayizivele, elicebile kumlando, isiko, nemvelo. Woza ukubona okuhlukile endaweni yakho yasekhaya!
Ihlobo elingunaphakade: Phakathi kwamaqhwa ebusika enyakatho, uzojabulela ilanga nezintende. Ungalokothi ubanda futhi cishe ungashisi kakhulu.
Udinga izizathu eziningi? Woza uzithole wena.
Izincwadi ezinkomfeni ezibalulekile noma amaphephandaba.
Ucwaningo lwamazwe ngamazwe luhlala emaunivesithi aphezulu.
Lapho sesiqedile, sifaka uhlelo lwe- PhD, nathi noma kwamanye amanyuvesi ahamba phambili.
I-Strong yokushicilela irekhodi kumaphephandaba aphezulu.
I-Honors degree nezinye iziklomelo zamazwe ngamazwe nakwamanye amazwe.
Lapho sekuqedile, ukuthola isihloko Umcwaningi wezwe waseMexico noma okulinganayo ezweni lakini.
Intshisekelo enamandla, ukuzibangela, ukuzimela ekufundeni nasekucwaningweni.
Intshisekelo yokucwaninga ngokukhethekile kuLimi LwezokuThuthukiswa koMvelo noma ezindaweni ezihlobene, ngokusho kwesihloko socwaningo osikiselayo.
Ukuzimisela okuphelele ukuqedela uhlelo: uma usuvunyelwe, kufanele uqede uhlelo bese uthola idijithi.
Amakhono okuhlela noma ama-script (izinga lesicelo) liyadingeka, nakuba ngabe i-PhD ingasuswa, ngokuzimisela ukufunda ulimi lohlelo olufana ne-Python.
Ukujwayela ngokuyisisekelo sosayensi yekhompyutha, njengezinhlaka zedatha, iziqalo, izilimi zokuhlela; Ulwazi oluhle lwezinkambiso zokuhlela luhlanganisa kakhulu.
Ulwazi oluhle lwesiNgisi: ukufunda nokubhala kusizinda sesayensi-ezobuchwepheshe.
Uzimisele ukushicilela amaphepha wezesayensi kumaphephandaba aphezulu. Ukuzimisela ukuthola umbhalo wokubhala nokushicilela. Ku-PhD, ukushicilelwa kwi-ISI JCR-indexed journals kuyadingeka ukuze kuphele iziqu.
Ukuzimisela ukubamba iqhaza emisebenzini yeLab, njengenhlangano yezinkomfa, futhi ngokujwayelekile ozimisele ukusiza kuyinto yokuhlanganisa.
Ukuzimisela ukufunda isiSpanish kuyinto yokuhlanganisa: kuzokwenza kube lula ukuphila kwakho lapha. Ukwazi iSpanishi kusengaphambili akudingeki.
Ukubekezela: ukufaka isicelo sohlelo lwamazwe angadinga amaphepha amaningi, kufaka phakathi izinguqulo eziqinisekisiwe, njll.
Uqedile idijithi yangaphambilini ngezikolo ezinhle: ze-Master's, degree degree BSc; I-PhD, iqedile i-Master's degree (nakuba abaqashiweyo abaqinile bangeniswa nge-BSc degree).
Ukuqiniseka. Iyiphi isinyathelo esilandelayo?
Xhumana noprofesa othanda ukuba nomeluleki: u-Alexander Gelbukh, uGrigori Sidorov, i- Ildar Batyrshin, noma uHiram Calvo (khetha eyodwa kuphela; ukuhanjiswa okukodwa kuzokwenqatshwa). Sicela ufake:
I-CV nerekhodi lakho eliphelele lokushicilela (uma likhona) namakhono (uma ikhona), phakathi kolunye ulwazi olufanele. Ukufaka isitifiketi se-degree yangaphambilini kanye nokubhalwa kwamaphuzu kuzoba usizo.
Kungani ufuna ukusebenzela endaweni ye-NLP? Yini oyaziyo ngakho, noma yikuphi okuhlangenwe nakho kwakho kuzihloko ezihlobene?
Kungani ufuna ngokukhethekile ukutadisha ku-CIC? Yini oyilindele kulo?
Ziyini izinhlelo zakho ngemuva kokuphothula? Isibonelo, uma ufaka isicelo se-Master's, uhlela ukuqhubeka no-PhD?
Bheka ikhasi lethu lomklomelo; Ingabe igama lakho liyokhanyisa lapho seliqedile? Ungasisiza kanjani ukuba uthuthukise ukwabelana kwabafundi bethu ukuthola ukuhlonishwa nemiklomelo?
Isihloko: ingabe unomqondo othize wesikhishoso sakho? Uma kunjalo, sicela usinike imininingwane. Idokhumenti ehlukile nesiphakamiso sokucwaninga yi-plus, ikakhulukazi ye-PhD.
Uma siqinisekisa ukuthi sikucabangela ukuthi unogada oqinile, sicela ulandele izinyathelo ezichazwe kwincazelo yami yenqubo yethu yokungena (njengamanje ngiyibhala ikakhulukazi ngezinga le-PhD; sicela usinike imiyalelo ye-MSc). Sicela ukhululeke ukuxhumana nathi uma ungabaza.
Imibuzo: Alexander Gelbukh.